Into Engendawo Ngale ndlela Iza ... | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 11, 2008 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Ngaba wakha wanoluvo lokuba kukho into eyenzekileyo, embi ngokwenene ukuba iza kwenzeka?
Isikrini seVista malunga nokuSebenza kwiMacBookPro yam ngokufana kwe-3.0 kunye ne-OSX Leopard.
tags: Androidapileamakhadi ekrisimesiInkonzo eyenzelweintengiso yomdlaloiqonga lentengiso yeselfowuniintengiso yesoftwareinkonzoUlwakhiwo
Mar 11, 2008 ngo 4:32 PM
SIKHUMBULE !!!!!! Uya kwindawo EMNYAMA !!!!! 😉
Mar 11, 2008 ngo 8:57 PM
Kuya kufuneka ufake umgca wefom eklasini yam yesiNgesi kwiposti yebhlog- enobuchule! (IMacbeth yenye yezinto ezimbi endizithethayo.)
Ngapha koko, ndiyathandabuza ukuba iAero Glass izakusebenza phantsi kwendalo ye-VM -ndilungise ukuba andilunganga.
Mar 11, 2008 ngo 9:28 PM
Ukufana kuthembisa ukukhutshwa kamva kulo nyaka kuxhasa iAero! Okwangoku, akukho kuhamba nangona.
Mar 12, 2008 ngo-9: 44 AM
Kutheni le nto ungaluhlazisa uxolo lwakho oluhle loomatshini nge-monstrosity?!?!
Okona kubi.OS.EVAR !!!
Kwafuneka ndibene-XP kunye nokufana kwam.
Mar 12, 2008 ngo-10: 04 AM
Ndiqinisekile ndiyayithanda iVista ngaphezulu kweWindows 3.11, Windows 95 kunye neWindows ME. 🙂 Ndibize ngokuba ngumngcatshi, kodwa ndiyayithanda iVista- siyayiqhuba kwinkqubo yonyana wam kwaye iAero iyoyikeka. I-OS lilitye eliqinileyo ngokunjalo, asikaze sibe nomcimbi.
Mar 12, 2008 ngo-11: 44 AM
Andikaze ndibenayo nayiphi na imiba ngeVista nokuba. Andiboni ukuba yintoni yonke le ngxabano.
Mar 13, 2008 ngo 8:36 PM
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ndiyekile ukuba nengxaki ngeWindows XP. Kuthathe kuphela ukulungiswa okulula; ukususa iplagi yamandla kunye nokufihla ibhokisi engwevu embi ekoneni. Ikona emnyama, emnyama.
Ngaphambi nje kwe-x-mas bendifuna ngokwenene ukuzama inkqubo esebenza kuphela kwiWindows. Emva kweeyure ezisi-8 zokulungisa i-bug, ndizama ukufaka i-WinXP kwakhona, ndabuliswa ngenkqubo ye-interface engathandekiyo, kangangokuba ndayeka yonke iprojekthi kunye, kwaye ndahlawula ngovuyo isixa esikhulu senkqubo yeMac esebenzayo.
Mar 13, 2008 ngo 8:44 PM
Yhu, ikhonkco elingalunganga. Nantsi eyona bendifuna ukuyithumela: